प्रेममा छन् रमेश प्रसाई ? यी गायिकाले रमेशको मन चोर्न सफल भईन् – Daily NpNews
प्युठानबाट बिरामी बोकेर काठमाडौँ जाँदै गरेको पिकअप भ्यान त्रिशूलीमा ख´स्यो, तीन बे´पत्ता
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/प्रेममा छन् रमेश प्रसाई ? यी गायिकाले रमेशको मन चोर्न सफल भईन्
प्रेममा छन् रमेश प्रसाई ? यी गायिकाले रमेशको मन चोर्न सफल भईन्
456 Less thanaminute
काठमाण्डौ । रमेश प्रसाईँ, यो नाम नसुन्ने सायदै बिरलै होलन् । र उनलाई नचिन्ने पनि बिरलै नै होलान् । ज्ञान, बुद्धि र विबेककासाथै स्पमरण शक्तिमा पनि प्रखर रमेश यतिबेला कसैको मायामा परेका छन् । विशेषगरी रमेशलाई हामीले भाषणको फिल्डमा पोक्त एउटा व्यक्तिको रुपमा चिन्दै आएका थियौं ।
तर रमेश एउटा भाषणकालागी मात्र नभई बहुपतिभाका धनी व्यक्ति रहेछन् भन्ने कुरा उनले नै प्रमाणित गरिदिएका छन् । रमेशलाई पछिल्लो केही समय यता हामीले दोहोरी गीतहरु गाएको देख्दै आईरहेका छौं । रमेशसंग दोहोरी गाउन कस्सिने गायिकाहरुलाई रमेशको गीतको जवाफ फर्काउन हम्मेहम्मे परको हुन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
त्यही दोहोरी गीतकै शिलशिलामा रमेशले गीतको जवाफ फर्काउने क्रममा भाईको माया छ भने कल्पना दाहाललाई फकाई दिन भनेका थिए । कल्पना दाहाल दोहोरी गाईका हुन् । जस्को हिजोआज टिकटकमा रमेशसंग निकै नै भिडियोहरु सार्वर्जनिक भई रहेका छन् । रमेशसंग कल्पनाले आफुलाई मन पर्ने गीतमा टिकटक भिडियो बनाई रहेकी हुन्छिन् ।
यिनीहरुको टिकटक भिडियो हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौं कि यिनीहरु साँच्चै नै एकअर्काको मायामा छन् । रमेशलाई टिकटकमा मस्कुराउन सिकाउने कल्पनालाई टिकटक प्रयोगकर्ताहरुले निकै नै रुचाएका छन् । यतिमात्र नभई रमेश र कल्पनाको जोडीलाई मन पराउने जति हाँजिर हौं भन्दै आफ्नो टिकटक पेजमा रमेश र कल्पनाको टिकटक भिडियोहरु शेयर गरेका छन् ।
४५ मिनेटसम्म सुटकेसमा बन्द भएकी नायिकाले खाेलिन राज
लज्जित भएपछि बल्ल ऐश्वर्याले यसरी रोजिन् अभिषेकलाई
भाइरल भए गोविन्दाकी छोरी टीनाका तस्वीर, हेर्नुहोस तस्विरहरु
उमेर ढल्किँदै जाँदा करिश्माकाे सुन्दरता यसरी झन बढ्दै (फोटोफिचर)
हजुर आमा बन्ने उमेरमा विवाह गर्ने नायिका यी हुन् !